Umboneleli woQeqesho loQeqesho lwe-EC-Council
Iprogram yoVavanyo iquka
I-EC-Council Certification Programme
Innovative Technology Solutions ezijoliswe kwi-IT eqhuba phambili kwi-IT kunye noqeqesho lwezakhono zoPhuhliso lwezakhono kunye nenkampani yokubonelela ngeenkombululo. IZIHLANGANISANA neenkampani zenkampani zeProsoft kunye ne-Hardware zinikeza uqeqesho kunye nezisombululo kwiinkampani ezininzi ezinkulu kunye namancinci kulo lonke i-Globe. IYI ikhethwe ngumthengisi we-MNC njenge-HP, EMC kunye namanye amaninzi ekuboneleleni ngamagumbi okuQeqesha nokuhlela izibonelelo zeemfuno zoqeqesho kwi-APAC / APJ esifundeni. IYAZIWA ngokusebenzisa i-Innovation ekuqeqesheni uqeqesho kwaye ihlaziywa rhoqo kunye nomxholo ochaphazelekayo wokunikezelwa ngabaqeqeshi abakhulu. IZIWAZI ziyaziwa ziguquguqukayo ngokwezifiso zomxholo wokuqeqesha kwaye zikulungele ukuhambisa uqeqesho kunoma yiphina indawo.
Hlola umhlabaUKUPHATHWA KWEZINTOubuchwepheshe obutsha kunye nobuchwephesha kakhulu
Ukucwangcisa ukuphucula inkcazelo yokhuselo lwenkcazo yakho?
Ule ndlela efanelekileyo! I-EC-IBhunga liye lazisa i-CEH v10 - iprogram yeshumi yeSikethi esiQinisekisiweyo se-Ethical Hacker. Ukuphuculwa okutsha kwe-CEH isitifiketi ngokugqithiseleyo kuhlanganisa i-20 yezizinda ezikhuselekileyo kunye nezikhuselekileyo zokukhusela. I-CEH v10 ifaka ubuchwephesha be-340 bokuhlaselwa okuqhelekileyo kusetyenziswa ngabagxeki ngokusebenzisa iimodyuli ze-20 ezipheleleyo.
Uqeqesho lwethu olukhethekileyo lwe-CEH v10 lujolise kuyo yonke into eqhuba impumelelo yakho. Le khosi ihlelwe ngendlela eyenza ube yingcali yendlela yokuziphatha yokuziphatha ngokukhawuleza eyenzelwe kuphela ukuhlolwa kokungena okanye imeko yokuqhawula ngokuziphatha. Uya kuqheleka ngezakhono zokukhwabanisa ngokuziphatha kunye nokuqokelela amathuluzi amatsha afanelekileyo kwaye afunekayo kubasebenzi bezokhuseleko kunye nabahloli beepen ukuze basebenze kumaqonga okusebenza. Uya kuphuhlisa ubuchule obuya kwenza ukuba ufumane isatifikethi se-Ethical Hacker esiqinisekisiwe emhlabeni jikelele.